राजबहादुर शाही - कान्तिपुर समाचार
राजबहादुर शाहीका लेखहरु :
मुगुमा हिमपातले जनजीवन कष्टकर
भारी हिमपातका कारण चिसोले मुगुको जनजीवन कष्टकर भएको छ । गत शनिबारदेखि नै मौसम बदली भई आइतबारदेखि रारा, मुर्मा, ताल्च, रोवा, खमाले, मुन्दु, मुगु , बाम, किम्री, माग्री लगायत दर्जनौ बस्तीमा भारी हिमपात हुँदा चिसो बढेर जनजीवन कष्टर बनेको हो ।
नेपालगन्ज–मुगुको हवाई भाडा १२ हजार !
मुगुको रारा विमानस्थलमा उडान गर्ने निजी एयरलाइन्सले कार्गोका नाममा दोब्बर भाडा असुल्न थालेका छन् । नेपालगन्जदेखि मुगु आउन यात्रु नभएको भन्दै एयरलाइन्सले एकतर्फी भाडा नै १२ हजार रुपैयाँ लिने गरेका हुन् ।
सवारी दुर्घटनामा कांग्रेस नेता मल्लको निधन
सवारी दुर्घटनामा सोरु गाउँपालिकाका कांग्रेसका नेता जयकर्ण मल्लको निधन भएको छ ।
सडक हस्तान्तरण भइसक्दा पनि बनेन पुल
मुगु– हुम्लादार्म लिंक रोड निर्माण अन्तिम चरण पुगे पनि कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज नबन्दा सवारी चलाउन मुस्किल भएको छ । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमले ६७ किमिमध्ये २६ किमी सम्पन्न गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । बाँकी ४१ किमि पनि अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि मुगुमा खाद्यान्‍न ढुवानी सुरु भएको छ । पहिलो लटमा यही साता नेपालगन्जदेखि स्थलमार्गबाट १ सय ७० क्विन्टल चामल गममढी पुगेको छ । थप चामल आउने क्रममा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ ।
मुगुमा जिप दुर्घटना, १ जनाको मुत्यु, १० घाइते
जिल्ला सदरमुकाम गमगढीदेखि सोरु गाउँपालिकाको तारापानी बजारतर्फ जाँदै गरेको क १ ज ३२ नम्बरको बोलेर जिप निगाले गाउँको खोलामा दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । १० जना घाइते भएका छन् ।
मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको चित्तैमा च्यांग्रा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले पठाएको १ करोड बजेट फ्रिज जाने भएको छ ।
हुम्ला पुगेर डा.केसीले चलाए शिविर
लकडाउनकै बीच डा. गोविन्द केसीले हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छन् । शिविरमा झन्डै डेढ सय बिरामीको उपचार गरिएको छ ।
यार्चा प्रतिबन्धले जीविकोपार्जनमा समस्या
कोरोना भाइरसको जोखिम र लकडाउनका कारण यार्चा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि विपन्न परिवारको जीविकोपार्जनमा समस्या देखिएको छ । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका करिब २ हजार ४ सय परिवारको आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै यार्चा संकलन हो ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका तीन वडामा प्रसूति गृह छैनन् । गर्भ जाँच गराउनुपर्दा महिलाले दिनभर पैदल यात्रा गरेर नाथर्पु स्वास्थ्यचौकी पुग्नुपर्छ । सोरु–३ को भीई, ४ को लिब्र, रावलबाडा, भादगाउँ, फोत, ५ नम्बर वडाको नेर र ताँजागाउँबाट नाथर्पु पुग्न एक दिन पूरै पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ।